Mmanya na-eme ka a chịwa mmadụ ọchị (1)
Onye umengwụ anaghị akọ ihe n’oge oyi (4)
Ihe mmadụ na-eche n’obi ya dị ka mmiri miri emi (5)
Ikwe nkwa n’echeghị echiche adịghị mma (25)
Mma ụmụ okorobịa bụ ike ha (29)
20 Mmanya na-eme ka mmadụ na-eme ihe a ga-eji na-achị ya ọchị,*+ mmanya na-emekwa ka mmadụ ghara ịna-ejide onwe ya.+ Onye ọ bụla o mere ka ọ kpafuo amaghị ihe.+ 2 Ndị mmadụ na-atụ eze egwu otú ha si atụ egwu ma ọdụm gbọwa ụja.+ Onye ọ bụla nke na-akpasu eze iwe na-akpọ ọnwụ òkù.+ 3 Ọ bụrụ na mmadụ na-agbara esemokwu ọsọ, a ga na-akwanyere ya ùgwù,+Ma onye ọ bụla bụ́ onye nzuzu na-esekarị okwu.+ 4 Onye umengwụ anaghị akọ ihe n’oge oyi. N’ihi ya, ọ ga na-arịọ arịrịọ n’oge a na-ewe ihe ubi, mgbe ọ na-enweghị ihe ọ bụla.*+ 5 Ihe mmadụ na-eche n’obi ya dị ka mmiri miri emi,Ma onye na-aghọta ihe ga-esepụta ya. 6 Ọtụtụ ndị na-ekwu na ha hụrụ ndị ọzọ n’anya,*Ma o siri ike ịhụ onye e kwesịrị ịtụkwasị obi n’eziokwu. 7 Onye ezi omume na-akwụwa aka ọtọ.+ Ụmụ ya, bụ́ ndị ga-anọchi ya, ga-enwe obi ụtọ.+ 8 Mgbe eze nọdụrụ ala n’ocheeze ka o kpee ikpe,+Ọ na-eleru anya ala chọpụta ihe ọjọọ niile.+ 9 Ònye ga-ekwu, sị: “Emeela m ka obi m dị ọcha.+ Abụghịzi m onye mmehie”?+ 10 Jehova kpọrọ ihe na-ezughị ezu e ji atụ̀ iheNa ụdị nkume abụọ e ji atụ̀ ihe asị.+ 11 Ọ bụ ihe nwatakịrị na-eme ka e ji amaMa ọ̀ na-akpa ezigbo àgwà ma na-eme ihe dị mma.+ 12 Ọ bụ Jehova kereNtị e ji anụ ihe na anya e ji ahụ ụzọ.+ 13 Anọla na-ehi naanị ụra, ka i wee ghara ịda ogbenye.+ Meghee anya gị, ị ga-erijukwa nri afọ.+ 14 Onye na-azụ ihe na-ekwu, sị: “Ọ dịghị mma, ọ dịghị mma.” Ma ọ na-ala, gaa nyawa isi.+ 15 Mmadụ nwere ike inwe ọlaedo ma ọ bụ nwee ọtụtụ nkume kọral,*Ma onye na-ekwu okwu otú gosiri na ọ ma ihe bara uru karịa.+ 16 Chịrị uwe mmadụ ma ọ bụrụ na ọ nara onye ọ na-amaghị n’ibé.+ Nara ya ihe ibé ma ọ bụrụ nwaanyị na-ebi ndụ rụrụ arụ* ka ọ nara n’ibé.+ 17 Nri e ji aghụghọ nweta na-atọ mmadụ ụtọ,Ma e mechaa, ájá* ga-eju ya ọnụ.+ 18 Atụmatụ na-aga nke ọma ma a gbaa izu.+ Soro ezigbo ntụziaka mgbe ị na-alụ agha.+ 19 Onye na-ekwutọ mmadụ na-agagharị na-akọsa ihe a na-achọghị ka ndị ọzọ mara.+ Gị na onye asịrị na-atọ ụtọ* akpala. 20 Onye ọ bụla nke na-akpọ nne ya na nna ya iyi,Ọkụ* ya ga-anyụ ma ọchịchịrị gbaa.+ 21 Ọ bụrụ na mmadụ ji anyaukwu nweta ihe,*Ọ gaghị enwe obi ụtọ* n’ikpeazụ.+ 22 Asịla: “M ga-emegwara ihe ọjọọ e mere m.”+ Nwee olileanya n’ebe Jehova nọ,+ ọ ga-azọpụta gị.+ 23 Jehova kpọrọ ihe na-ezughị ezu e ji atụ̀ ihe* asị. Ihe e ji atụ̀ ihe nke e ji aghọgbu mmadụ adịghị mma. 24 Ọ bụ Jehova na-eduzi nzọụkwụ mmadụ.+ Ndị mmadụ hà ga-aghọtali ụzọ ha?* 25 Mmadụ na-esiri onwe ya ọnyà ma ọ bụrụ na o kwe Chineke nkwa n’echeghị echiche,*+Mechazie chebawara nkwa o kwere echiche.+ 26 Eze ma ihe na-ewepụ ndị ajọ omume+Otú e si ewepụ mkpo ọka n’ọka.*+ 27 Ihe mmadụ na-ekwu* yiri mpanaka* Jehova,Nke na-eme ka a mata ihe dị n’ime ime obi mmadụ. 28 Ịhụnanya na eziokwu na-echebe eze.+ Ịhụnanya na-eme ka ọ chịrị na-aga.+ 29 Mma ụmụ okorobịa bụ ike ha.+ Mma ndị agadi bụ isi awọ́ ha.+ 30 Ịta mmadụ ahụhụ* na-eme ka a kwụsị ime ihe ọjọọ,+Ịdọ mmadụ aka ná ntị* na-emekwa ka ime ime obi mmadụ dị ọcha.
^ Ma ọ bụ “ka mmadụ na-eji ndị ọzọ eme ihe ọchị.”
^ O nwere ike ịbụ, “Ọ ga-achọ nri n’oge a na-ewe ihe ubi, ma e nweghị ihe ọ ga-ahụ.”
^ Ma ọ bụ “na-egosi ndị ọzọ ịhụnanya pụrụ iche.”
^ Ma ọ bụ “okwute.”
^ Ma ọ bụ “onye na-eji ọnụ ya arata ndị mmadụ.”
^ Na Hibru, “ihe nketa.”
^ Ma ọ bụ “Chineke agaghị agọzi ya.”
^ Ma ọ bụ “nkume abụọ dị iche e ji atụ̀ ihe.”
^ Ma ọ bụ “ụzọ ha ga-eso.”
^ Ma ọ bụ “o kwuo n’echeghị echiche, sị, “Ọ dị nsọ!”
^ Na Hibru, “Ume mmadụ na-eku.”
^ Na Hibru, “Ọnyá.”
^ Na Hibru, “Iti ihe.”